Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU-Norway oo kulan muhiim ah yeeshay.
Ururka OYSU-Norway oo kulan muhiim ah yeeshay.
Oslo:Waxaa caasimaddaOsloee dalka Norway, caawa fiidkii lagu soo gabagabeeyey, kulan si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay yeesheen Ururka Dhalinyaradda iyo Ardayda Ogadeenya (OYSU-Norway), laguna qabtay xarunta Jaaliyadda ee magaaladdaOslo. Shirkan oo ahaa mid isagu ka duwanaa hababkii hore ee kulamadu u dhici jireen, wakhtigana aad loo ilaaliyey, ayna ka soo qeyb-galeen xubno cusub oo ururka ku soo biiray, ayaa lagu furay sida caadada ahayd Aa’yado kamid ah quraanka kariimka ah.
Xoghayeha ururka OYSU, ee dalkaNorway, Mudane Yusuf Abdi ayaa goobta kasoo jeediyey war-bixin ku saabsan hawlaha shaqo ururka OYSU-Norway u qorshaysan sanadkii 2013 iyo isbadellada la filayo inuu ku talaabasado ururka OYSU-Norway.
Hogaanka abaabulka iyo Arimaha Bulshadda ee urarka OYSU-Norway Mudane Mohamed Hassan oo aan wareysi la yeelannay caawa ayaa tibaaxay muhiimada gaarka ah ee isku xidhka iyo ka qayb-gelinta dhinac walba ah ee dhalinyaradda S.Ogadeenya ee dalkan ku nool u leedahay midnimada bulshadeena iyo halganka loogu jiro sidii looga xoreyn lahaa gumeysiga Woyaanaha ee haysta dhulka Ogadeenya.
Dhinaca kale, waxaa cashiro qiimo badan goobta kulanka ka jeediyey Xoghayahii hore ee OYSU, Mudane Abdi- oo kulanka ka akhriyey cashir aad u qiimo badan oo ku saabsanaa “Xidhiidhka iyo Wada-shaqeynta”; mowduucan oo la filayo inuu wax badan ku biirin doono tayadda wada-shaqeyneed ee ka dhaxeysa ururka dhalinta OYSU-Norway. Mudanaha ayaa sheegay in looga baahan y dhalinyaradu sidii ay isaga dhisi lahaayeen dhinac walba, si ay u noqdaan kuwo tayo leh kana midho-dhaliya ujeedooyinka loo aas-aasay ururka OYSU.